आउनुहोस ब्लगिङको दुनियाँमा !!! – Ram Kumar Pariyar
Next तपाईंको ल्यापटपमा पानी पस्यो ? यसो गर्नुहोस ।
Previous भुलवश सेण्ड भएको ईमेल कसरी रद्द गर्ने ? गुगलको नयाँ फिचर
प्रविधि · २०७२ असार १३ 0
रामकुमार परियार |	२०७२ असार १३
ब्लग शब्द अङ्ग्रेजी शब्दहरू “वेब” र “लग” को समिश्रण द्वारा बनेको हो । सुरुमा ब्लगको प्रयोग इन्टरनेटमा आफ्ना स-साना नोटहरू राख्न भएपनि अहिले ब्लग आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्ने एक प्रमुख माध्यमका रूपमा विकसित भएको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ब्लगको शुरुवात कहिलेबाट भयो भन्ने यकिन इतिहास छैन । तर , २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक कु गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नेपालमा वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमका रूपमा ब्लग देखिएको हो ।
अहिले करिब ५ सयको हाराहारीमा नेपाली ब्लगहरू सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । यो तथ्याङ्क नेपाली ब्लगहरूको सङ्ग्रह bloggers.com.np मा हेर्न सकिन्छ । सामान्यतया: लेखहरू राखिने ब्लगहरू प्रचलित भए पनि ब्लगहरू अन्य विभिन्न प्रकारका हुने गर्छन् । भिडियोसम्बन्धी ब्लगलाई “भि­लग” भन्ने गरिन्छ । त्यस्तै फोटोहरू राखिने “फोटो­ब्लग” पनि प्रचलित छन् । अचेल मोबाइलबाट पनि ब्लग गर्ने प्रविधिको विकास भइसकेको छ, त्यस्ता ब्लगलाई “मोब्लग” भन्ने गरिन्छ । विषयवस्तुको हिसाबले पनि विभिन्न प्रकारका ब्लगहरू हुने गर्दछन् , जस्तै राजनीतिक ब्लग , ट्राभल ब्लग , फेसन ब्लग आदि । यी सबै ब्लगहरू खोज्न technorati.com नामक सर्च इन्जिन को पनि विकास गरिएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपको फाईदा उठाउनेलाई १० वर्ष जेल र २ लाख जरिवाना हुने